Ny fiantraikan'ny fananganana sy fanovana | Martech Zone
Ny fiantraikan'ny fananganana sy fanovana
Talata, Oktobra 27, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mamaky aho Kevin EikenberryBoky, Fahaiza-mitarika miavaka: famoahana ny fahaizanao mitarika fahaiza-manao iray isaky ny mandeha ary hisotro kafe amin'i Kevin rahampitso. Boky mahafinaritra izy io - ary toko iray no tena nanjo ahy fiovana tompon-daka.
Kevin dia miresaka momba ny fanovana amin'ny an-tsipiriany. Iray amin'ireo fanovozan-kevitra ampiasain'i Kevin ny boky 1962 nataon'i Everett Rogers, Diffusion an'ny fanavaozana. Teôria izay niaritra ny fizahan-toetra ny fotoana… manome fahitana momba ny fomba fandraisantsika ny haitao. Ireto misy ny fanapotehana:
Ny tena mahaliana kokoa aza dia rehefa mandinika ny fananganana zanaka ianao amin'ny halavan'ny fotoana. Ireto misy santionany amin'ny fananganana ny fanavaozana:
Izany dia nilaza fa tsy azoko antoka fa nisy olona niresaka na nandrefy ny fiantraikan'ny fananganana zaza. Ny iray amin'ireo torohevitra omeko ny mpanjifa dia, rehefa voaporofo ny fomba iray fa tsy mbola mahazatra, goavana ny fotoana mety hisy fiantraikany amin'ny orinasanao. Rehefa mandeha ny fotoana ary manohy tsy miraharaha ny fananganana azy ireo orinasa, dia very ny mety ho vokatr'izany. Ity ny tabilao teôria misy ahy:
Nijery aho rehefa niditra ny orinasa aloha loatra amin'ny fanavaozana tsy voaporofo ary nilentika amina volabe sy fampiasam-bola an-taonina tao anatin'ireny teknolojia ireny, very ny ankamaroany. Ohatra iray maoderina ny informatika. Nandany vola an-tapitrisany ireo mpamorona sy mpikirakira ny teknolojia tany am-boalohany ary tsy nahazo tombony; na izany aza, nanokatra ny lalana hanaporofoana ny teknolojia izy ireo. Raha vantany vao voaporofo dia tsy dia lafo intsony ny informatika ankehitriny ary mitombo haingana amin'ny fananganana azy. Ny fiantraikany amin'ny orinasa mampiasa computing cloud amin'izao fotoana izao dia goavana… fa satria raisina manerana ny indostria izy io dia tsy ho tombony amin'ny fifaninanana intsony - ho be mpampiasa izany.
Rehefa mandinika ny fifangaroan'ny varotrao ianao ary manohy tsy miraharaha ny maha-zava-dehibe ny atiny, ny bilaogin'ny orinasa, ny fanatsarana ny motera fikarohana ary ny haino aman-jery sosialy… tsy azonao atao ny manatevin-daharana ny ankamaroan'ny mpandray anjara izay misy akony lehibe amin'ny orinasanao. Afaka manohy miandry ianao - io tokoa ilay azo antoka lalan-kivoahana. Na izany aza, aza gaga ianao raha toa ka tsy misy fiatraikany amin'ny orinasanao ny fanangananao tara. Raha ny marina dia mety mila mandray tsotra izao ianao mba hijanonana amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsena.
Amin'ny maha mpivarotra sy teknolojia ahy dia mino aho fa zava-dehibe ny orinasa manohy miaraka amin'ny haitao. Tsy milaza aho fa ny orinasa rehetra dia tokony handray sy hanangana aloha. Ny tiako holazaina dia ny hahafantaran'ny orinasa ny fahafahan'ny fananganana aloha ary inona no mety ho vokany raha ampiharina amin'ireo olana amin'ny orinasany. Ny orinasa tsirairay dia misy fanamby ary ny teknolojia mivoatra dia mety ho vahaolana mahomby amin'ireo olana ireo.
Ohatra iray mahazatra: Raha orinasa iray miady amin'ny marketing miditra ianao ary mahazo fitarihana mahay amin'izao fotoana izao, ny fananganana voalohany dia mitovy amin'ny marketing amin'ny motera fikarohana, ny fampandrosoana ny atiny (bilaogy momba ny asa) ary ny fanitarana ny atiny mankany amin'ireo tambajotra mifandraika (tambajotra sosialy). Amin'ny alàlan'ny fananganana aloha dia azonao atao ny manomboka ny mpifaninana aminao ary mahazo ny anjaran'ny tsena. Raha miandry ianao dia hanao ireto fotsiny mba haharaka hatrany amin'ny ho avy… ary lasa ny fotoana ahazoanao tombony.
MC Hammer 2.0 sy marika manokana
Resadresaka nifanaovana tamin'i Steven Woods: Fiteny Vatana nomerika